China Cryogenic okisijeni chirimwa mutengo mvura okisijeni chirimwa vagadziri uye vanotengesa | KANA
1: Iyo dhizaini dhizaini yemuti uyu ndeyekuchengetedza kuchengetedzwa, kuchengetedza simba uye nyore kushanda uye kugadzirisa. Iyo tekinoroji iri kutungamira chinzvimbo munyika.
A: Mutengi anoda yakawanda yekugadzira mvura, saka isu tinopa yepakati kumanikidza mweya yekudzokorora maitiro ekuchengetedza iyo mari uye simba rekushandisa.
B: Isu tinoshandisa kudzokorora mweya compressor uye yakakwira, yakaderera kuyedza. nzira yekuwedzera yekuchengetedza magetsi.
2: Inotora DCS komputa yekudzora tekinoroji kudzora main panel, yemuno mapaneru panguva imwe chete. Iyi sisitimu inogona kuongorora maitiro ese emuti.
Mhepo yekuparadzanisa mweya inoenderana nenzvimbo dzakasiyana dzekufashaira kwechinhu chimwe nechimwe mumhepo. Mhepo kutanga yakadzvanywa, precooled, uye ndokubviswa H2O uye CO2. Mushure mekutonhora mune yepakati kumanikidza kupisa exchanger kusvika yasvika kune iyo liquefaction tembiricha, inogadzirisa mukoramu kuti uwane mvura yeojeni uye emvura nitrogen.
Muti uyu mamorekuru sieve yekuchenesa mweya neiyo turbo expander maitiro.
Mushure mekubviswa guruva uye kusachena kweanogadzira mumhepo firita, mweya mbishi unoenda kune turbine yemhepo compressor kumanikidza mweya kuenda ku1.1MpaA, uye kutonhorera kusvika 10 ℃ mumhepo precooling unit. Ipapo inopinda mune kumwe kushanda mamorekuru nesefa absorber kubvisa iyo H2O, CO2, C2H2. Mhepo yakachena inotsikirirwa neyekuwedzera uye inopinda mubhokisi rinotonhora. Mhepo yekudhinda inogona kupatsanurwa kuita zvikamu zviviri. Mushure mekutonhora kusvika pa255K, chikamu chimwe chinodhonzwa kutonhodza unit 243K, zvino chinoramba chakatonhora mune chikuru kupisa exchanger. Mhepo yakatonhorera inokwenenzverwa kune anowedzera, uye chikamu chemweya wakawedzerwa unopinda muchinonyanya kupisa kupisa kuti udzorezve, zvobva zvabuda mubhokisi rinotonhora. Uye mamwe mativi anoenda kukoramu yepamusoro. Chimwe chikamu chakatonhodzwa neyekuyerera kuyerera, uye chinoenda kukoramu yepasi mushure mekuwedzeredzwa.
Mushure memhepo ichinyanya kugadziriswa, tinogona kuwana mvura yemvura, marara emvura senitrogen uye yakachena mvura nitrogen mune yakaderera chikamu Mhepo yemvura, marara emvura senitrogen uye yakachena mvura senitrogen yakayamwa kubva pazasi chikamu ichienda kumusoro kwepamusoro mushure mekutonhora mvura uye yakachena mvura nitrogen inotonhorera. Mushure mekugadziriswa mukoramu yepamusoro, tinogona kuwana 99.6% kuchena kwemvura oksijeni muzasi kwekoramu yepamusoro, inobuda sechigadzirwa. Chikamu che nitrogen chakayamwa kubva kumusoro kwekoramu yekubatsira chinobuda kunze kwebhokisi rinotonhora sechigadzirwa.
Wetrogen senitrogen yakayamwa kubva kumusoro kwekoramu yepamusoro ichibuda mubhokisi rinotonhora mushure mekudzoreredzwa neinotonhora uye huru kupisa exchanger. Yakagutswa chikamu chayo, inoenda kune mamorekuru nesefa yekuchenesa system seyakavandudza mweya sosi. Vamwe vanobuditswa.
Pashure: Cryogenic yepakati saizi yemvura okisijeni gasi chirimwa Liquid Nitrogen Dyara
Zvadaro: Cryogenic mhando yepamusoro inoshanda yakachena kuchena senitrogen mweya kupatsanura chirimwa mvura uye oksijeni jenareta
Industria Liquid Nitrogen jenareta
Industria Liquid Nitrogen jenareta Midziyo
Liquid Nitrogen Kugadzirwa Kwekudyara